Soomaaliya, 31 December 2018 page 1
Ku soo dhawaada barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka. Waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Saraakiiisha ciidamada Koonfur Galbeed ayaa VOA-da u sheegay in dagaladaasi ay kaga dhinteen sideed ka mid ah askartooda sidoo kalena 14 ka mid ah Maleeshiyada Al-shababna ay ku dileen.
Faaqidaadda: Doorashada Puntland
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay waxa hortaagan in Puntland ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Afar qof oo lagu dilay degmada Afgooye
Rag hubeysan ayaa maanta toogasho ku dilay afar qof, degamada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Shabaab oo Dad Ka Afduubtay Cadalle, Guriyana Gubay
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay shalay gubeen guryo ku yaalla tuulada Ceel Muluq oo u dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana ay kaxaysteen dad degaanka deggan.
Aragtida xildhibaanada ee isbeddelka guddiga maaliyadda
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa shalay dib u habeyn ku sameeyay xubnaha guddiga maaliyadda.
Bandhigga VOA: Taariikhda diblomaasiyadda
Faah Faahin Isbadalka Gudiga Dhaqaalaha ee Baarlamaanka
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa wax ka bedel ku sameeyey xubnihii guddiga dhaqaalaha iyo dabagalka ee baarlamaanka Soomaaliya, ka gadaal markii uu sheegay in ay ku guuldareysteen dhexdhexaadinta khilaafyo yaaley guddiga dhexdiisa.
Ku dhowaad 10 qof ayaa ku geeriyootay dagaal maanta ka dhacay deegaanka Kaxandhaale ee Gobalka Galgaduud.
Mursal oo isbeddel ku sameeyey guddiga maaliyadda
Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyay xubnaha Guddiga Maaliyadda ee baarlamaanka.
Sidee wax looga qaban karaa amni-darrada Muqdisho?
Qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee Muqdisho ka dhaca ayaa ah kuwa soo noqnoqda oo weli xal buuxa loo heli la'yahay.